प्रदेश कृषि मन्त्रीले भनिन्–‘प्रस्ताव चिटिक्क पार्दैमा अनुदान दिईन्न,गोठमै पुगेर किसान खोजिन्छ’ - Arthapage
प्रदेश कृषि मन्त्रीले भनिन्–‘प्रस्ताव चिटिक्क पार्दैमा अनुदान दिईन्न,गोठमै पुगेर किसान खोजिन्छ’
प्रकाशित मितिः २४ पुष २०७५, मंगलवार १४:५४ January 8, 2019
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ की कृषि मन्त्री आरती पौडेल, नेपालगन्जउपमहानगरपालिकाका मेयर डा धवलशमसेर राणा ।
बाँके : प्रदेश ५ कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले ‘चिटिक्क प्रस्ताव तयार पार्दैमा र सरकारी कर्मचारीसंग हिमचिम बढाउँदैमा’ अनुदान नदिइने बताएकी छिन् । उनले अबदेखि प्रस्तावनाकै आधारमा अनुदानको मुल्यांकन नगर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
‘जुन कृषकले गोठमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरुबाट राम्रो प्रस्तावना आउन सक्दैन भन्ने मलाई थाहा छ । उहाँहरुको सरकारी निकायसंग पनि पहुँच हुँदैन । किनकी हाम्रा कृषकहरुको बास्तबिकता मैले बुझेकी छु । ’–मन्त्री पौडेलले भनिन्–‘तर जस्ले गोठमा काम गर्दैनन्, उनीहरुको प्रस्तावना चाही चिटिक्क देखेकी छु । कर्मचारीसंग गतिलै हिमचिम पनि हुन्छ । अब प्रस्तावना राम्रो बनाउने तर गोठमा काम नगर्नेले अनुदान पाउदैन । बास्तविक किसानको खोजी गरिन्छ । उनीहरुकै हातमा अनुदान पु¥याईन्छ ।’
हेफर नेपालको सहयोगमा मिडिया एक्सन नेपालको आयोजनामा आईतबारबाट शुरु भएको कृषि तथा आर्थिक सवालमा पत्रकारहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रमको मंगलबार नेपालगन्जमा समापन गर्दै प्रदेश कृषि मन्त्री पौडेलले अब अनुदानबाट बास्तबिक कृषकलाई छुट्न नदिने बताईन । उनले प्रदेश ५ का सबै जिल्लाका १ सय ८५ कृषकलाई स्थानीय सरकार, सहकारीको समन्वयमा अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिदै पौडेलले भनिन्–‘हालसम्म १२ सय १६ वटा प्रस्तावना आएको छ । प्रस्तावनाकै भरमा निर्णय हुँदैन । त्यसैले हामी हालसम्म ११ सय बढि कृषकको गोठसम्म पुगेका छौं ।’
यसपटक अनुदान छनौटका लागि कृषको गोठमा पुग्ने काम भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले पहिचान भएका बास्तबिक कृषकलाई अहिले अनुदान दिन नसकेपनि अन्य कार्यक्रमहरुमा सहभागि गराइने बताईन । पत्रकार अभिमुखिकरण सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाक मेयर डा. धवल शमसेर राणाले बाँके जिल्लाबाट कुनै बेला तेस्रो देशसम्म निर्यात हुने गरेको स्मरण गर्दै भने, –‘तर अहिले अवस्था ठिक उल्टो छ । उताबाट करोडौको खाद्यन भित्रिरहेको छ ।’ कृषि र आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउन पनि मेयर राणाले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारुले कृषि र आर्थिक क्षेत्रलाई सन्चारकर्मीहरुले संधै प्राथमिकता दिइरहेको बताए । मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले कृषिक्षेत्रमा पत्रकारहरुलाई कलम चलाउन प्रोत्साहित गर्न देशभर अभिमुखिकरण गर्न लागिएको बताए । हेफर नेपालका प्रबन्धक कृष्ण कट्टेलले सन्चारक्षेत्रको पैरबीले कृषि क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा गरे । तीन दिन चलेको कार्यक्रममा बाँके, बर्दिया,, दांग, सल्यान, सुर्खेत, प्युठानका पत्रकारहरु सहभिाग थिए ।
प्रकाशित मितिः २४ पुष २०७५, मंगलवार १४:५४ |
Posted in नियमित समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, भिडियो
Prevगरे के हुँदैन ? महिला किसानले छ महिनामा १७ करोडको खसी,बोका बिक्री गरे
Next२९ औं प्याब्सन डे मनाइयो